स्वास्थ्य – paradeskhabar.com
स्वास्थ्य : हरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ ! हरियो प्याज स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यो एउटा कन्दमुल हो । यसको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोग बाट मुक्त हुन सकिन्छ । धेरै जसो मानिहिरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर हरियो प्याजले मोटो शरीरको तौल पातलो बनाउँछ । यसले ब्ल्ड सुगर लेभललाई कन्ट्रो’ल गर्ने भएकाले डायबे’टीजको बिरा’मीलाई निक्कै फाइदा पु¥र्‍याउँछ। यसमा एन्टी इन्फ्ले’मेटरीको गुण भएकाले यसले अर्थराइटिस हुनबाट जोगाउँछ । हरियो प्याजमा भिटामिन ए समेत रहेको हुँदा यसले आँखाको ज्योति बढाउनुका साथै रतन्धो हुनबाट पनि जोगाउँछ । यसमा एन्टी ब्याक्टे’रियल गुण भएकाले यसले रु’घाखोकी तथा टाउँको दुखेकोलाई सन्चो बनाउँछ। यसमा भिटामिन सी को मात्रा धेरै हुने भएकाले कम’जोरी हटाउँछ र भरपू
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला । ९८ – ९९ व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। १०० पुग्यो भने पारा’सिटामोल खानुहोला। शरीर दुखेमा र टाउको दुखेमा पनि पारासिटा’मोल खान सकिन्छ । २. पल्स अक्सि’मिटरबाट अक्सि’जनको स्तर नापिरहनुहोला। यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला। यसलाई प्रोन पोजि’सन भनिन्छ । पेटमा २ वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलिगाँ’ठानेर एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नुहोला। यसले फो’क्सोको क्षमता बढाउँछ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ । ३. भिटामिन सी २ पटक, जिंक २ पटक, भिटामिन डी हप्ताको १ पटक खानुहोला। आबश्यकता अनुसार पारासिटा’मोल, कफ सिरप र ट्याब्लेट खान सकिन्छ । ४. अक्सि’जनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला । यो नयाँ भेरिए”न्टले अचानक को’भिड निमोनि’या गरा
स्वास्थ्य : खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने दुग्धजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा फोक्सोमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई बाहिर फाल्न शरीरलाई गाह्रो पर्छ । घरेलु विधि प्रयोग गर्ने तरीकाः १. यो विधि सुरु गर्दाको पहिलो दिनमा सुत्नु अगाडि जडिबुटीबाट बनेको चिया खानुहोस् । यस्तो चिया खानाले पेटमा भएका र कब्जि’यतको कारक बनेका विषाक्त तत्वहरु नाश हुन्छन् जसले गर्दा फोक्सोलाई आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ । २. दोश्रो दिनमा बिहानको खाना खानुपूर्व दुईवटा कागतीलाई तातो पानीमा मिसाएर खानुहोस् । त्यसपछि ३०० मिली भुँइकटहर वा
को’रोना जितेर अस्प’तालबाट घर फर्किए खरेल ।
काठमाडौं : पूर्व प्रहरी तथा सामाजिक अभियन्ता रमेश खरेल अस्पतालबाट घर फर्किएका छन् । कोरो’ना संत्र’मणका कारण उनी गम्भी’र बिरा’मी भएका थिए । नियोनियाका कारण उनलाई भेन्टि’लेटरमा समेत राखेर उप’चार गरिएको थियो । करिब तीन साता लामो उपचारपछि उनी सोमबार नेपाल प्रहरी अ’स्पतालबाट डिस्चा’र्ज भएका हुन् ।- सङ्क्र’मणमा कमी आएपछि अस्पतालमा घटे बिरा’मी, खाली हुँदै बेड ! को’भिड–१९ को सङ्क्र’मण दरमा केही कमी आएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल अक्सि’जनसहितको उपचार कक्ष थप सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य उप’करणसहित सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरुमा पनि २० प्रतिशत मात्र कोरो’नाका बि’रामी रहेकाले कामपाले तत्काल थप उपचार कक्षको आवश्कता नरहेको जनाएको हो । दोस्रो लहरको को’रोना सङ्क्र’मण बढ्दै गएपछि यसअघि कामपाले १२ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरी आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण र उपकरण खरिदका लागि